Maalinta: Diseembar 24, 2018
Go'aanka Maxkamadda, Olalaha IZBAN Way Joojin Doonaan
Izmir Karşıyaka 1. Maxakamadda Shaqaalaha waxay u aragtay maamulka 'BZBAN mid xaqdarro ah, tareenno wata todobo makaanik oo howlgab ah si ay u jabiyaan shaqo joojinta İZBAN. Maxakamadda ayaa joojisay tareenka iyadoo taxaddar digniineed leh. Izmir Karşıyaka [More ...]
Turkey dhoofinta Assembly (TIM), by Award Turkey dhoofinta Adeegga 500 Great abaabulay ka Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan, Maaliyadda iyo Wasiirka Maaliyadda Dr. Berat Albayrak, Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, Shaqaalaha Qoyska iyo [More ...]
Laba Layli Muhiim ah oo Lagu Heli Karo DHMI
DHMİ, oo ah mid ka mid ah hay'adaha ugu hanka weyn ee duulimaadyada adduunka oo ay la socoto mashaariicdeeda iyo fahamka adeegga ka sarreeya, waxay ku guuleysatay abaalmarino laba sharaf leh. Agaasinka Guud ee Maamulka Madaarada Gobolka (DHMİ) [More ...]
Antalya 3. Khadadka Heerka Tareenka marxaladda furan bisha Febraayo
Duqa magaalada Menderes Türel, oo sii wadaya inuu Antalya ku xiro shabagyada birta, 3. Daraasadaha Nidaamka Tareenka Marxaladda. Gudoomiyaha Türel, oo baranaya wadada xNUMX kiiloomitir ee u dhaxaysa Varsak-Otogar [More ...]
Sunflower Valley iyo Baaskiilada Baaskiil, oo loo keenay Magaalada Sakarya Metropolitan Dawladda Hoose, ayaa soo jiidata xiisaha weyn ee muwaadiniinta. Kalk, waqtiga X XXX ee maalinta aan u adeegno muwaadiniinteenna. Kaliya maahan muwaadiniinta gobolka laakiin dhamaan magaalada [More ...]
Xilliga Asphalt wuxuu ahaa mid wax ku ool ah magaalada Bursa
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, oo ku dhawaaqday 2018 inay tahay yol wadada sanadka ve bilowga mudada isla markaana bilaabay asphalting ma ahan oo kaliya bartamaha magaalada laakiin sidoo kale degmada 17, waxay billowday xNUMX kiiloomitir kulul ee 210 kilomitir iyo 350 kiiloomitir sanad gudihiis. [More ...]
Soo-jeedinta ku-meel-gaadhka ee IZBAN
Shaqo joojinta IZBAN ee Izmir ayaa ka dambaysay laba toddobaad. Maamulka 'BZBAN wuxuu sii wadaa inuu noqdo' jabinta-jabiyaha ', kaas oo lagu qeexay inuu yahay dambi sharciga waafaqsan. Waxa taas ka sii daran, nidaam gaadiid aad u weyn oo ay maamusho shaqaalaha 300 ka badan, toddobo hawlgab ah [More ...]
Filim sameeyaha filimka Kazim Kizil, oo galay shaqo-joojinta Izmir ee Izmir shaqo-joojinta, 'shaqo-joojinta IZBAN sidii haddii uu nin rabshad wata u beddelayo' wuxuu weydiyay jawaabta muwaadin, oo lagu daabacay qaabkeeda cayriin. Loo shaqeeyaha IZBAN, shaqajooga garaaca [More ...]
IZBAN's First 6 Khasaaraha Maalmihii ugu Horeeyay ayaa Baasuuuray
Xafiisyada İZBAN ee aan aqbalin shuruudaha gorgortanka wadareed ee shaqaalahooda ayaa dhibaato gelinaya hay'adda. Khasaarihii ugu horreeyay ee 6 ee maalinlaha ah ee IZBAN wuxuu ku soo beegmay iyada oo loo baahan yahay shaqaaluhu muddo hal sano ah, halka shaqo joojinta 15. maalin. Gaadiidka dadweynaha Izmir [More ...]
Go'aanka maxkamadda in indhaha lagu hayo IZBAN
Intii lagu gudajiray shaqa joojinta 'İZBAN', oo laba toddobaad ka hadhsanayd, ayay maxkamaddu go’aansatay inay ku dhufato fadeexadan. Si kasta oo ay maxkamaddu go'aan uga gaadho, shaqaaluhu kama tanaasuli doonaan sii-wadista shaqaalahooda, waxayna sii kordhinayaan qiimaha Kocaoğlu ee saadaalinta dhibaatada. [More ...]
IZBAN ayaa la yaabtay haweenka Machinista
Injineer The naag ka shaqeeya izban dheer Turkey ee line: musqusha dhibaatada ugu weyn inoo ah. Laga bilaabo Alsancak ilaa Aliağa iyo dib ugu laabashada Aliağa, waxaan sameyneynaa wado nasasho la'aan ah. Waxba kama cabno wakhtigan. [More ...]
Waa maxay sababta dib loo dhigo Madaarka Istanbul?
2 toddobaad ka hor, waxaan qoray in dib u dhigista tallaabada maddaarka Istanbul dhamaadka Disembar ay ajandaha tahay oo aan la yaab noqon doonin haddii go'aanka dib loo dhigo. Xaqiiqdii, 29 wuxuu furi doonaa Oktoobar, [More ...]
Madaxweynaha Altay, ayaa ka soo baxay xarunta Vatman
Uğur İbrahim Altay, Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Magaalo Weyn, ayaa adeegsaday baska iyo taraamka ka dib markuu soo kormeero Dhirta Daaweynta Biyaha Wasakhda Deegaanka iyo Xarumaha Tatlıcak. [More ...]
Kuwa doonaya inay u guuraan Uludağ
Ku dhowaad 2 kun oo qof oo doonayey inay ku qaataan fasaxa dhammaadka usbuuca ee Uluda one, oo ka mid ah xarumaha fasaxa ee ugu caansan dalxiiska xilliga qaboobaha ee Bursa, waxay sameeyeen safaf dhaadheer oo ku hor yaal baabuurka fiilada. Dalxiiska jiilaalka waa mid ka mid ah meelaha lagu jecel yahay [More ...]